Ny Nation of Domination hiaraka hiaraka aorian'ny 22 taona - Wwe
Ny Nation of Domination hiaraka hiaraka aorian'ny 22 taona
Mpikambana efatra ao amin'ny ankolafy Nation of Domination angano no hiaraka amin'ny hetsika QPW amin'ny 26 feb 2022.
D'Lo Brown, The Godfather, Mark Henry, ary Ron Simmons (a.k.a. Faarooq) no ho vahiny manokana ao amin'ny QPW's SuperSlam 3 any Doha, Qatar. Ireo efa-dahy ireo dia tsy niara-niseho tamina vondrona nandritra ny 22 taona.
Ny hetsika misy kintana dia hatao ao amin'ny Lusail Sports Arena, izay mitazona olona 20 000 mahery. Halefa manerana ny fahitalavitra FITE izy io.
Ron Simmons dia nanaiky fa ny Nation of Domination dia fotoana iray manan-danja @TheRock hamela ny toetrany manazava hamirapiratra ao anatiny @WWE . #WWETheBump pic.twitter.com/bZB9Xc1zdy
- WWE's The Bump (@WWETheBump) 24 Febroary 2021
Booker T, Bret Hart, Eric Bischoff, ary Sting koa dia voamarina ho an'ny QPW SuperSlam 3. Brian Cage, Cinta de Oro, EC3, Hiroshi Tanahashi, Jon Moxley, Sammy Guevara, ary Will Ospreay dia isan'ny mpiady izay hiseho amin'ny fampisehoana Kenny Omega koa dia miresaka amin'ny QPW momba ny fisehoany.
Ny fahombiazan'ny Nation of Domination's WWE
Anaran-kintana maro no hiseho ao amin'ny QPW SuperSlam 3
Ny Nation of Domination dia heverina ho iray amin'ireo antoko WWE manan-kery indrindra amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny ankapobeny dia misy superstar afrikanina-amerikanina, ny firenena dia solontena olona 12 nandritra ny roa taona nihaonan'izy ireo WWE teo anelanelan'ny Oktobra 1996 sy Oktobra 1998.
Faarooq dia nitarika ny The Nation of Domination tamin'ny voalohany talohan'ny nahatongavan'i The Rock ho mpitarika ny vondrona tamin'ny martsa 1998. I Clarence Mason, J.C. Ice, ary i Wolfie D no nisolo tena ny The Nation nandritra ny volana vitsivitsy voalohany tamin'ny fahitalavitra WWE. Ahmed Johnson, Crush, Owen Hart, ary Savio Vega koa dia nanana andraikitra tamin'ny maha-mpikambana ao amin'ny Nation azy.
ahoana ny mitomany rehefa afaka t
Sasha miaraka amin'ny akanjo ba 'The Nation Of Domination'. pic.twitter.com/jCauk63oSi
- __Danny__ (@BigMatchBanks) 14 martsa 2021
Tao anatin'izay taona lasa izay, ny The New Day (Big E, Kofi Kingston, ary Xavier Woods) dia lasa iray amin'ireo ekipa nahomby indrindra tamin'ny tantaran'ny WWE. Tany am-boalohany dia tadiavin'i Woods ny hanolorana ny Andro Vaovao ho The Nation of Domination 2.0, fa ny mpanoratra ny WWE kosa dia nihomehy azy.
Izy izay dia tsaho be tamin'ny taona 2020 fa ny MVP dia hamorona kinova vaovao an'ny The Nation of Domination. Nanohy nanangana an'i Bobby Lashley, Cedric Alexander, ary i Shelton Benjamin ho mpikambana ao amin'ny The Hurt Business. Na izany aza, tsy nantsoina hoe Nation of Domination nohavaozina tamin'ny fahitalavitra WWE mihitsy izy ireo.
Zavatra 5 nianarantsika tamin'ny Total Divas: Season 6, Episode 13
Ahoana ny fomba hampivelarana toetra iray: 27 tsy misy toro-hevitra Bullsh * t!
Ricardo Rodriguez amin'ny tsy maha-anisan'ny hazakazaka WWE faharoa an'i Alberto Del Rio [Exclusive]
Zavatra 14 tokony hatao alohan'ny hatory izay hametraka anao amin'ny torimaso lalina sy milamina
Lalao ekipa 3 ambony ekipa RAW vs ekipa SmackDown
Horonan-tsary 5 tena ankafizin'i WWE tao amin'ny Youtube tamin'ny 2018-19
Nihetsika ny AEW Star tamin'ny famoahana an'i WWE Bray Wyatt; nandefa fehezan-teny mampientam-po
Lucha Underground fizarana 16 fizarana 16: Johnny Mundo vs. Sexy Star, famaranana Battle of the Bulls
Torohevitra tsotra 7 hahasambatra amin'ny fanambadiana tsy sambatra
Paige dia miresaka momba ny taratasy fitiavana 'mahamenatra' novakiany ho an'ny Roman Reigns
Dana White dia nanao fanamarihana lehibe momba ny fiverenan'ny UFC an'i Ronda Rousey
Ahoana ny fomba hanoratanao ilay tarehim-pitiavana tonga lafatra hampitomany ny sakaizanao
fihaonana amin'ny olona amin'ny Internet voalohany
can of whoopass vato mangatsiaka
ny fomba hanampiana ny namana amin'ny fisarahana
wwe mpanjaka amin'ny fefy boribory 2019
tsy eto amin'ity tontolo ity ianao